बिहिवार, असार १८, २०७७ सेतोखरी
प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामनारायण विडारी एकदिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कराइरहेका थिए– ‘म संविधान सभामा पनि सदस्य थिएँ । त्यतिबेला हामीले संविधान सभाबाट सरकारको अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्ने भनेर सर्वसम्मतले संविधानमा लेख्यौं ।
जस्तोसुके आपतविपत र भूँइचालो आएपनि पेश गर्ने निर्णय भयो । त्यसको एउटै उद्देश्य भनेको साउनमै बजेट रिलिज गरेर सरकारलाई काम गर्न सहज होला भन्ने हो । तथापि सोचेजस्तो भएन । अहिले पनि आषाढ लागेपछि बजेट रिलिज गर्ने क्रम जारी छ । के गरेर बस्छन् मन्त्रीहरु ? किन काम ढिला हुन्छ ? संविधानको मर्म किन बुझ्दैन सरकार, यो कुरा मैले बुझन सकिरहेको छैन ।’ यसरी सत्ता पक्षकै सांसदले प्रतिनिधि सभामा यो कुरा उठाएर आफ्नो सरकारको विरोध गर्नुको प्रमुख कारण त अति भएर होला । आफ्नै सरकार हो भनेर जे गरे पनि बुद्धि र विवेकमा विर्को लगाएर भेडाबाख्राझै कति बस्ने भनेर पनि होला ।
विकास निर्माणका काम गर्ने असारे मोडेलमा बजेट विनियोजन गरिन्छ त्यो पनि प्रायगरीे डल्लो बजेट अर्थात अबण्डा बजेटको रुपमा । अर्थात जता पनि प्रयोग गर्न सकिने बजेटको रुपमा । तत्पश्चात बजेट दिने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो पकेट एरिया अर्थात मतप्राप्त हुने क्षेत्रलाई फोकस गरेर काम गर्ने स्थानको छनौट हुन्छ । वर्षैभरि योजना माग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा मानिसहरुको मेला लगाइन्छ । निवेदन र प्रपोजल पेश गर्न लगाइन्छ । अन्ततः आफुलाई भोट आउछ कि नोट आउछ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर योजनाको क्षेत्र छनौट गरिन्छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी वा ठेकेदार छनौट गर्दा समेत हरेक हिसावले आफ्नै वरिपरिका मानिसहरुले काम र दाम पाउनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । भवन निर्माण सम्पन्न गरेर भवनको नक्सा पछि बनाए जस्तै विकास निर्माणको असारे मोडेलमा पनि काम शुरु गरिन्छ र काम शुरु हुनुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने काम वा योजनाका चरणहरु पुरानै तिथिमिति राखेर पछि बनाउने गरिन्छ ।
नेपाली चलचित्र जगतका महानायक राजेश हमालले विजयकुमारले सञ्चालन गरेको हिजोआजका कुरामा हसिमजाग र व्यङ्ग्य गर्दै एकपटक भनेका थिए–‘अलि पहिलेको कुरा हो, नेपालमा प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निजी आवासमा पुगेछन् । निजी आवास दामी, सुन्दर र झकिझकाउ रहेछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई यसको राज के हो भनेर सोधेछन् । राष्ट्रपतिले महलको टपमा गएर हातले इशारा गरेर धेरै टाढा रहेको सडकको पुल देखाउदै त्यही पुल बनाउदा आएको कमिसनले बनाएको हो भनेछन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति नेपालमा आउदा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको निजी आवास देख्दा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई राखेकै जिज्ञाशा राखेछन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले जवाफमा आफ्नै महलको टपमा गएर धेरै टाढाको नदी देखाएर त्यही नदिमा बनाउनु पर्ने पुलको बजेटबाट आएको कमिसनले बनाएको हो भनेर जवाफ दिएछन् । जव कि त्यहाँ पुल नै बनेको थिएन ।’यसको आशय हो कि भ्रष्टाचार विश्वभरी व्याप्त छ । तथापि हाम्रो मुलुकमा यसको मात्रा अत्यधिक छ । यतिसम्म कि कामै नगरी कागजात मिलाएरै बजेट पचाउने गरिन्छ ।
मान्छे नमर्ने शहर नभए झै भ्रष्टाचारमा असंलग्न हुने त मान्छे नै नहुने भयो अव । त्यस्तो कोही भेटियो भने असामाजिक ठहरिने स्थिति आइसक्यो विस्तारै । किनकि भ्रष्टाचार गर्नेहरु नै समाजमा सम्मानित छन् । उसैको अघिपछि मानिसहरुको लर्को छ । मलाई त लाग्छ, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे त दोषी हो नै । भ्रष्टाचार गर्नेलाई यो अकूत सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न नसोधी आँखा चिम्लेर उसैको पछि लागेर उसैलाई सम्मान गर्ने हाम्रो समाज र हाम्रो समाजका मानिसहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । भनाइ पनि छ–‘सुशासन जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रशासन (जनशक्ति) र नागरिक दुवै पक्षको क्षमतामा निर्भर गर्दछ ।’सदाचारी भनिएका मानिसहरुले पनि अवसर नपाउदासम्म त आफूलाई इमान्दार र सदाचार देखाइरहेका हुन्छन् नै । अवसर पाएको अवस्थामा भने उनीहरु पनि कुनै मानेमा कम देखिदैनन् । केही गर्छन कि भनेर भरविश्वास गरिएका मानिसहरु पनि पालैपालो हाम्रो मुलुकको राज्यसत्तामा बसेर मुलुकलाई लुटेको तथ्यले यो कुरा प्रमाणित गरिरहेकोे छ ।कसैले त केही गर्छन कि भनेर जनताले आलोपालो गरेर सरकारमा पठाए । तथापि भ्रष्टाचार गर्ने मामलामा सारभूत रुपमा कोही पनि कोही भन्दा कम देखिएनन् ।
बजेटमा हप्तौं छलफल र बहस हुन्छ । तथापि एक अक्षर पनि संशोधन नगरी अक्षरशः पास गरिन्छ । साँच्ची किन गरिदो हो छलफल र बहसको नाटक ? संशोधन र पृष्ठपोषणकै लागि गरिएको हो भने किन एक अक्षर पनि संशोधन नगरिदो हो ? संशोधन नगर्ने निश्चित भएपछि किन छलफल र बहसको मञ्चन गरिदो हो ? सम्झिदा पनि आश्चयबोधले टाउको गह्रौं भएर छट्किन थाल्छ । जनताका प्रतिनिधि कराइरहने । सरकारले भने ‘काग कराइरहन्छ, पिना सुकिरहन्छ’ को शैलीमा आफ्नो पारा नछोड्ने । मलाई थाहा छैन । सायद यही होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको शासनपद्धति !देश कोरोनाले जर्जर भइरहेको बेला आफुले खाइपाइ आएको सुविधा कटौति गर्दा पनि राष्ट्रसेवकहरु चुपचाप बसे । जनप्रतिनिधिहरुको भने यहीबेला सेवासुविधामा थप गरियो । सायद अरुभन्दा जनप्रतिनिधिहरु मुलुकप्रति सकारात्मक भएको परिणाम होला यो । सकारात्मक भएरै जर्जर मुलुकलाई पनि उर्वर देखे होलान । सवैभन्दा बढि देशको माया पनि उनीहरुले नै गर्छन भनेर त्यहाँसम्म पठाइएको हो । सायद यही होला माया गरेको !सायद, यसरी नै होला विकासको दीर्घकालीन सोच ! सवैलाई चेतना भया !